Hello Nepal News » कोम्यानले तयार पारे नयाँ सिजनमा आफ्नो ‘योजनामा नपर्ने’ दर्जन खेलाडीको सूची : को–को छन् ?
कोम्यानले तयार पारे नयाँ सिजनमा आफ्नो ‘योजनामा नपर्ने’ दर्जन खेलाडीको सूची : को–को छन् ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रमुख प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले नयाँ सिजन २०२१–२२ का लागि बेस्ट टोली निर्माण गर्ने तयारी थालेका छन् । स्पेनिस सञ्चारमाध्यमका अनुसार डच म्यानेजरले अहिले समर विन्डोमा अनुबन्ध गर्ने खेलाडीका साथै आफ्नो योजनामा नपर्ने खेलाडीको सूची पनि तयार पारेका छन् । उनले नयाँ सिजना आफ्नो योजनामा नपर्ने खेलाडीको सूची तयार पारेर क्लबको नयाँ बोर्डलाई बुझाइसकेका छन् । यस्तो रिपोर्ट त्यहाँका चर्चित खेल सञ्चारमाध्यमहरू ‘स्पोर्ट’, ‘मार्का’लगायतले छापेका छन् ।
जारी सिजन युरोपियन च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएर निराश रहेका कोम्यान नयाँ सिजनमा प्रमुख प्रशिक्षक रहने करिब पक्का देखिएको छ । त्यही भएर उनले अहिलेबाटै नयाँ सिजनका लागि तयारी थालेका हुन् । बार्सिलोनाले पछिल्ला ६ वर्ष च्याम्पियनस लिगमा भोग्दै आएको ठूलो असफलता र बेइज्जतीपूर्ण हारहरूको कथा बदल्ने गरी बार्सिलोनाले नयाँ सिजनमा फरक कहानी लेख्ने गरी तयारी थालेको छ । त्यसअनुसार क्याटलान क्लबले नयाँ सिजनका लागि विशेष तयारी गरिरहेको छ ।
नयाँ अध्यक्ष जोआन लापोर्टा अहिले क्लब छाड्ने निर्णय गरेर बसेका कप्तान लिओनल मेस्सीसँग नयाँ सम्झौता गर्नेदेखि नयाँ खेलाडी अनुबन्धसम्म कसरत गरिरहेका छन् । अहिले उनको योजनामा टोलीका प्रमुख खेलाडी मेस्सीसँग नयाँ सम्झौता गर्नु र केही नयाँ खेलाडी क्लबमा भित्र्याउनु मुख्य योजना छन् । बार्सिलोनाले समर विन्डोमा चाहेका खेलाडीको सूचीमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका युवा स्टार अर्लिङ हल्यान्ड, इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका युवा डिफेन्डर इरिक गार्सिया, फ्रेन्च क्लब लियोनका फरवार्ड मेम्फिस डिपे, म्यानचेसटर सिटी छाड्ने घोषणा गरेका फरवार्ड सर्जियो अगुएरोसम्मको नाम चर्चामा छ ।
यस्तैमा, कोम्यानले हाल टोलीमा रहेका तर नयाँ सिजन आफ्नो योजनामा नपर्ने खेलाडीको सूची तयार पारेर त्यसअनुसार निर्णय लिन क्लबलाई सुझावसहित सूची बुझाएको खबर छ । कोम्यानले नयाँ सिजनमा आफूलाई आवश्यक नपर्नेखेलाडीमा केही ठूला खेलाडीको नाम पनि समावेश छ । जसमा लामो समयदेखि चोटसँग जुध्दै आएका ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिपे कोउटिन्हो प्राथमिकतामा छन् । त्यसैगरी, डेनिस फरवार्ड मार्टिन ब्रेथवेट र डिफेन्डर सामुएल उम्टिटी पनि बहिरिने सूचीमा छन् ।
कोम्यानको सूचीमा गत समरमा बार्सिलोना पुगेका बेस्नियन मिडफिल्डर मिरालेम पियानिच, डिफेन्सिभ मिडफिल्डर सर्जी रोवेर्टो, अर्का डिफेन्डर जुनियर फिर्पो, लोनमा बाहिर रहेका रहेका खेलाडी कार्लेस एलिना र माथेउस फर्नान्डेज पनि सूचीमा छन् । त्यसैगरी, हल्यान्ड अनुबन्ध गर्ने स्थितिमा बाहिरिने सूचीमा स्टार फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यान र विंगर उसामान डेम्बेलेको नाम पनि समावेश भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कोम्यानको योजनामा युवा डिफेन्डरहरू रोनाल्ड अराउजो र ओस्कार मिङ्गुएजाको नाम एकदमै सुरक्षित छ । उनीहरू कोम्यानको टोलीको प्रमुख सदस्य बन्नेछन् ।
नयाँ अध्यक्ष लापोर्टाले बार्सिलोनाको एकेडेमीबाट आएका खेलाडीहरू अन्सु फाती, रिकी पुच, मोरिबाजस्ता युवा खेलाडीलाई लगातार टोलीमा स्थान दिएर निखार्ने योजना बनाएकाले उनीहरूको भविष्य निश्चित गर्न पनि डेम्बेले र ग्रीजम्यानको कोठा खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई बेचेर बार्सिलोना अन्सु फाती, रिक पुच र पेड्रीजस्ता खेलाडीलाई सिनियर टोलीको नियमित हिस्सा बताउन मात्रै चाहँदैन, नयाँ खेलाडी भित्र्याउनका लागि पैसा समेत बटुल्न चाहन्छ ।
प्रकाशित मिति २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०१:५७